Umaki: ukugembula kwezemidlalo | Martech Zone
Maka: ezemidlalo ukugembula
Ukumakethwa Kwemidlalo Yeselula shazi, Okufundwa Okuhle Kakhulu Okuvela kubahlinzeki
ULwesibili, May 2, 2017 ULwesithathu, May 3, 2017 Amandla weCáit
Iminyaka eyishumi futhi ama-Smartphones asebenze kahle futhi ngokweqiniso. Idatha ikhombisa ukuthi ngo-2018, kuzoba nabasebenzisi be-smartphone abayi-2.53 billion emhlabeni jikelele. Umsebenzisi ojwayelekile unezinhlelo zokusebenza ezingama-27 kudivayisi yakhe. Ngabe amabhizinisi awunqamula kanjani umsindo lapho kunokuncintisana okungaka? Impendulo ilele endleleni eholwa idatha ekumakethweni kohlelo lokusebenza nokuqonda okufundwa kubathengisi beselula abayibulalayo emikhakheni yabo. Umkhakha wezemidlalo,